Somaliland xornimadeedii dagaal ayay kula soo noqotay ictiraafkana wada hadal ayey ku helaysaa | Somaliland.Org
Dadka ku andacoonaya haddii aynu shirka ka qaybgalno Somalia ayaa la inagu darayaa way riyoonayaan, ama cadowga Somaliland ayaa wax gashaday.
Somaliland inay tahay wadan xor ah oo madaxbannaan shacabku 97% ayuu ugu codeeyay, distoorkeenana way ku taallaa, cid badali kartaana ma jirto.
Dawlad ku sheegga Somalia ee TFG waxay rabaan in Somaliland ayna shirka London ka qaybgalin, oo markaa dawladaha waa weyn ee adduunku ina go”doomiyo. Waxaa sidaa daliil u ah dacaayadaha raqiiska ah ee ay warbaahinta ku siidaaayaan , sida Somaliland mashruuc biyood ayaanu u saxeexnay iyo TFG iyo maamulo goboleedyo ayey la shirayaan. Erayadaasi waxay uga jeedaan dadka Somaliland waa caadifiin ee ha boodaan oo dawladooda ha ka shakiyaan. Somaliland way qaangaadhay, way xisaabtamaysaa, danteedana way taqaannaa ee ha isdaalinina. Waxaa fiican inaynu tariikhda wax ka baranno, madaxwaynihii hore ee Masar mudane Anwar Sadat, khudbad uu ka akhriyey baarlamaanka Masar 1977, waxa uu yidhi si dhulka Yuhuuddu inaga haysato ula soo noqonno si nabad ah, waxaa aan diyaar u ahay xattaa in aan tago barlamaanka Yuhuudda ee Kineesat. Adduunka oo idil ayaa yaabay, dawladaha carbeed ayaa aad ugu cadhooday, xattaa Yuhuudda ayaa rumaysan wayday. Sadat wuu kaga dhabeeyay, geesinimo ayuu muujiyey,Talabiib ayuu ka dagay barlamankii yuhuuddana wuu ka khudbeeyay. Khudbad tariikhi ah oo qiima weyn, si fiicanna looga soo shaqeeyay ayuu ka akhriyay Knesatka. Natiijada safarkiisii waxa uu noqday mid midha dhal ah. Yuhuuddu dhulkii Masar ay ka haysatay ee Sinai oo dhan ayey si nabad ah ugu kacday.
Sidoo kale madaxweynaheennu mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siiraanyo khudbad sanadeedkii uu ka akhriyey barlamaanka Somaliland January 2012 waxa uu yidhi, Somaliland meelkasta oo ay dani ugu jirto, waanu u tagaynaa,mudanayaasha barlamaanka Somalilandna sacab ayay ku ansixiyeen.
Madaxwayne, shacabka Somaliland waxay doorteen adiga,ku xigeenkaaga iyo barlamaanka,taladana u dhiibteen. Shacabka Somaliland raali ayey ka yihiin geedi socodka loogu jiro ictiraaf raadinta iyo xoojinta xidhiidhka dawladaha adduunka. Dad yar oo shaki la galiyay yeyna inaga leexin dariiqa toosan ee ka qayb galka shirka London. Somaliland waa inay ka qaybgasho madal kasta oo lagaga hadlayo wax khuseeya. Waa inaynu codkeenna iyo mawqifkeena meelkasta gaadhsiinno. Xornimadeenna dagaal ayeynu ku soo dhacsannay, ictiraafkeenana dood iyo wada hadal ayaynu ku gaadhaynaa.
Sida argaygii madaxwaynaha martiqaadka u keenay caddeeyay, madaxwayne Siiranyo waxaa fursad loo sinayaa inuu la fadhiisto,lana hadlo,qadiyadeenana ka dhaadhiciyo David Cameron iyo madax kaloo adduunka ah. Shirkaa hadaynu ka baaqano dalal waa weyn oo adduunka ka mid ah ayaa colaad inoo qaadaya.
Ka qaybgalka shirkaa London insha allah wuxuu inoo noqon doonaa , talaabo soo dhawaysa ictiraafkeenna.
Xildhibaan, Dr Cali Yuusuf Axmed
Previous PostWasiirkii hore ee X/Xoolaha Oo ku geeriyooday HargeysaNext PostBaaxadda khasaarihii dagaalkii shalay ka soo gaadhay maleeshiyadii soo weerartay Ciidamada Qaranka	Blog